Home Wararka (Daawo) Wasiir Goodax oo khilaafkii Puntland meel xun gaarsiiyay
(Daawo) Wasiir Goodax oo khilaafkii Puntland meel xun gaarsiiyay
Wasiirka Waxbarashada Puntland. Cabdullaahi Maxamed Xasan ayaa ka jawaabay hadalkii uu sheegay Wasiirka Waxbarashada Hiddaha iyo Tacliinta Sare ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre.
Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada dowladda Federaalka Soomaaliya oo warsaxaafadeed ku qabtay xafiiskiisa ayaa sheegay in Wasiirka Waxbarashada Puntland aanu isaga go’aan ka qaadan karin hannaanka waxbarashada ee maamulka isagoo carabka ku dhuftay in waxbarashada Puntland ay u afduuban tahay shaqsiyaad gaar ah.
Is faham waaga dowladda Federaalka iyo Puntland oo meel hoose joogay ayaa hadda waxaa dab ku sii shiday Wasiir Goodax isagoo si ula kac ah u carab dhabay shaqsiyaad xilal horay uga soo qabtay Puntland sida Senator Faroole iyo Wasiiradii waxbarashada ee Puntland Juxaa & Cali Warsame.
Sida ku cad dastuurka Federaalka ah dowlad goboleed walba waxay xaq u leedahay in ay dejisato manhajkeeda waxbarasho isla markaana ay maamusho dugsiyada iyo jaamacadaha dowlad goboleedka. Balse Wasiir goodax ayaanan u arag in ay dan gaar ah ugu jirto maadaama uu ka howlgalo Banaadir oo aan lahayn dowlad goboleed taasoo siineysa in uu noqdo Gobolka Banaadir midka kaliya ee hoos imaanaya Wasaaradda Waxbarashada DFS.